နည်းပညာ စာအုပ်များ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on January 23, 2015 at 9:00pm
(၁)ကိုဒီမွန်း နည်းပညာ စာအုပ်​များ
6။ ။ဝင်းဒိုး XP/7တင်နည်း
8။ ။ဝင်းဒိုး7ကို USB FLASH DRIVEဖြင့်တင်
11။ ။ဝင်းဒိုး7အကြောင်း အပိုင်းတစ်
12။ ။ဝင်းဒိုး7အကြောင်း အပိုင်နှစ်
9. ။ ပိုတိုရှော့ဆော့ဝဲကွန်ထရိုးကီးများအ
3။ ။ Laptop_Hardwareပိုင်းပျက်စီးခြင်းကို
4။ ။ Laptop_Motherboardရဲ့Keyboard
10။ ။ LaptopထဲကSO-DIMMအကြောင်း
wifi pass hack wifiလွယ်လွယ်hackနည်းစားအုပ်+software
ဖုန်းမျိုးစုံrootလုပ်နည်း rom' firmware စာအုပ်
android ဖုန်း အကြောင်းစုံ
(၂)ရွှေထက်တန်ဖိုးရှိသော (နည်းပညာ) စာအုပ်ပေါင်း ၁၃၀ကျော်
၁၃၀ ကျော်ဆိုတော့ Rar နဲ့ ချုံ့ထားတာ သုံးဖိုင်တင်ပေးလိုက်တယ်။
Download အပိုင်း ၁
Download အပိုင်း ၂
Download အပိုင်း ၃
လိုရင်းတိုရှင်းရေးသားထားတဲ့ Knowledge စာအုပ်တွေပါ.
Credit TO : Youth Computer
(၃) နည်းပညာစာအုပ်​ ၁၆၁ အုပ်​
ပဲခူး သားလေးကိုသူ >‎ကိုဒီမွန်း(အခြေခံနည်းပညာဂရု)
ကျွန်တော်အခုတင်ပေးချင်တာလေးကတော့ကျွန်တော်link'လုပ်ထားတဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်သောစာအုပ်ပေါင်း161'ခုကို နည်းပညာညီအကိုတွေအတွက်ပြန်လှည်မျှဝေပေးစေချင်တယ်ဆရာတွေအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ အခုလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ စာအုပ်တွေကို မိမိရဲ့Pcloud'မှCopy'ယူနည်းကိုလဲအောက်မှအပုံတွေနဲံရှင်းပြထားပါတယ်
ဒါက နည်းပညာစာအုပ်ပေါင်း161'အုပ်ပါပါတယ် Link[လင့်]ယူပါနည်းပညာစာအုပ်များ
တကယ်လို့မှ မိမိရဲ့Pcloud'ထဲကိုCopy'ကူထည့်တာလိုင်းမကောင်းတာတို့လုပ်ရတာအစဉ်မပြေတာတို့ဆိုရင်အောက်ကျွန်တော် နည်းပညာစာအုပ်တွေသိမ်းထားတဲ့Pcloud'Gmail'နှင့်Password'ပေးထားပါတယ်လိုအပ်ရင် သုံးပါ အားလုံးသုံးနိုင်ပါတယ် အဲ့ထဲက စာအုပ်တွေကိုတောင်းလာခဲ့ရင်တော့ကိုယ်တစ်ဆင့်ပြန်လှည်မျှဝေပေးပါ
တစ်ချို့ဖုန်းတွေဆို PDFဖတ်ဖို့Reader မပါသူတွေအတွက် မရှိရင်ဒေါင်းပါPdf readerပါ MBအနည်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးဖတ်နိုင်ဖို့ ဒေါင်းရန်::::::;:::;;;;
ပဲခူး သားလေး ကိုသူ
Hein Thu Aung is nowamember of ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺